Архивы Региональные новости - Журнал "Картофельная Система"
Ugu weyn Madaxa Wararka Ruushka Wararka gobolka
Gobolka Moscow wuxuu kordhin doonaa aagga khudaarta laga beero dhulka furan 18%
Aagga lagu beero khudaarta dhulka bannaan ee gobolka Moosko waxaa la qorsheynayaa in lagu kordhiyo 18% sannadkan. Tani waxaa ku dhawaaqay fuliyaha ...
Heerka wax soo saarka beeraha ee gobolka Novgorod rubucii III ee 2020 wuxuu dhaafay celceliska soosaarka waxsoosaarka ee Degmooyinka Federaalka-Waqooyiga-Galbeed ...
Madaxa Tervropol Territory wuxuu ugu yeeray xaalada adag ee dhanka dalagyada gobolka
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров указал на тяжелую ситуацию для краевого АПК в условиях продолжающейся засухи. "Ситуация - критическая", -...
Dowladda gobolka Omsk waxay qorsheyneysaa inay si buuxda u gaarto gobolka oo leh baradho iyo khudrad sannadka 2025
В конце декабря 2020 года в Омской области была принята новая программа развития АПК. Согласно этому документу, одной из важных...
Dhisme bakhaar khudaarta iskaashatada ah oo lagu dhameystiray gobolka Lipetsk
Tuulada Oktyabrskoye, Degmada Usmansky, Istok bixinta iyo suuq geynta iskaashatada macmiilka beeraha (SSSPK) waxay dhameystireen dhismaha bakhaar khudaarta iskaashatada. Maalgashiga mashruucu wuxuu gaadhay 22,7 ...
Gobolka Saratov waxay kordhinayaan aagga baradhada
Gudoomiyaha Gobolka Saratov Valery Radaev bishii Diseembar 22 wuxuu qabtay kulan ku saabsan horumarinta dhismaha agro-warshadaha. Intii lagu guda jiray dooda natiijooyinka sanadka, madaxa gobolka ...
Shirkadda Moscow ayaa dib u soo celin doonta keyd baradho ah oo qaadi kara 10,4 kun tan
Shirkada "Agrofirma Bunyatino" waxay dhameystireysaa dib u dhiska keydinta baradhada oo qaadi karta 10,4 kun tan. Tan waxaa ku dhawaaqay Wasiirka Beeraha iyo Cuntada ee Gobolka Moscow ...
Haysashada beeraha ee Krasnoyarsk "Dary Malinovki" waxay xubin ka noqotay mashruuc qaran "Waxsoosaarka shaqada iyo taageerada shaqada"
Haysashada beeraha ee Dary Malinovki waxay xubin ka noqotay mashruuca qaran ee Waxsoosaarka Shaqada iyo Taageerada Shaqo ee Territory-ka Krasnoyarsk. Saddexda sano ee soo socota, shirkadda waxaa la siin doonaa ...
Dhammaan waxqabadyadii la qorsheeyay sannadka 2020 waa la dhammaystiray si buuxda. Kaqeybgalayaasha mashruuca waa beeraha abuur ee Anatoly Lipatov, Denis Pavlyuk, Ivan ...
Shay farshaxan cusub oo loogu talo galay baradho ayaa ka muuqday gobolka Tyumen
Agrofirm "KRiMM" waxay ku qancisay dadka degan iyo martida tuulada Uporovo cunsur aan caadi aheyn oo horumar ah. Albaabka laga galo bakhaarka shirkadda, hadda waxaad ku arki kartaa wax cajiib ah ...